अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा हेलिकप्टर अवतरण निषेध
समाचारमंगलबार, २२ श्रावण , २०७५
अन्नपुर्ण आधारशिविरमा हेलिकप्टरसहित पुगेका पर्यटक । तस्वीर: हिमाल अर्काइभ
जन्मदर्ता निःशुल्क, कोदो प्रवर्द्धन
गाउँसभाले जन्म, मृत्यु, बसाइँसराई, विवाह दर्ता लगायतको शुल्क निर्धारण समेत गरेको छ ।
जन्म, मृत्यु र विवाह दर्ताका लागि ३५ दिनभित्र दर्ता गर्दा निशुल्क गर्ने र सो समय कटेमा रु. एक सय जरिवाना दस्तुर लिने निर्णय भएको छ ।
यस्तै, नागरिकता सिफारिसमा पनि रु. एक सय दस्तुर लिने निर्णय गाउँ सभाले गरेको छ ।
गाउँपालिकाले यसै वर्ष ‘कोदो माहोत्सव २०७५’ आयोजना गर्ने भएको छ ।
कोदोको पोष्टिक महत्वबारे चेतना विस्तार र कोदो खेतितर्फ किसानलाई प्रोत्साहन दिन यो महोत्सब आयोजना गर्ने निर्णय भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै होटलमा कोदोबाट बन्ने परिकार बनाउन र पर्यटकलाई लक्षित गरी मेनु राख्न आग्रह गरिएको अध्यक्ष कुँवरले बताए ।